ဒီပို့စ်လေးဖတ်ပြီး ..ဖြစ်နိုင်မယ်မထင်တဲ့ စိတ်ကူးရတယ် … အဲ့ဒါကတော့ ရွာသူရွာသားတွေပေါင်းပြီး .. အဲ့ဒီလို လူလိမ်တွေကို .. အကွက်ချဖော်ထုတ်တာမျိုးလေးလုပ်ပြီး …. ကိုယ်နဲ့ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်ကို ကယ်တင်ရအောင်လေ …. … ။ အားလုံးကိုယ့်အလုပ်နဲ့ကိုယ်မို့ .. ခက်ခဲမယ်ဆိုတာ သိပါတယ် … ။ တွေးကြည့်ရုံလေးပါ …
မမအိတုံရေ တစ်ခါလောက် လိုင်းကားအတူတူပတ်စီးရအောင်
အဲဒီကိတ်စကကြာဘီမွန်မွန်ရဲ့ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ခေါ်သွားလို့ အဲဒီဗေဒင်ဆရာဆီရောက်ဖူးတာ ကိုယ့်ရှေ့မှာတင် အမျိုးသမီးတစ်ယောက်လက်ကို တကယ့်ကိုပယ်ပယ်နယ်နယ်ကိုင်နေတာ အဲဒါနဲ့လန့်ပြီးပြန်လာတာ နောက်မှသိရတာက ဗေဒင်လာမေးတဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကို အဲလိုလုပ်တော့ သူ့အမျိုးတွေက မခံနိုင်လို့တိုင်တာတဲ့။ အရင်က အဲဒီထက်ပိုဆိုးတယ်တဲ့။ ထောင်ကထွက်ခါစ မို့လို့ လက်လောက်ပဲ….